ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁) | MoeMaKa Burmese News & Media
Photo – 7Days Daily, Feb 16th 2015, File Picture
ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAAစခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)
၁။ တပ်မတော်က ကိုးကန့် MNDAA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့ အခိုင်အမာ ခြေကုပ်စခန်းတွေကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မတ်လမှ စတင် ထိုးစစ်ဆင်ခဲံ့ပါတယ်၊၊ ရှေးဦးစွာ တပ်မ(၆၆)က ချင်းရွှေဟော်နဲ့ လောက်ကိုင် ဧရိယာအကြား ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကြီးကို ခြိမ်းချောက်နေတဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့များ ခြေကုပ်ယူရာ ပွိုင့် (၁၅၈၄၊ ၁၈၅၄၊ ၁၅၀၈) တောင်ကုန်းစခန်းများအား တိုက်ခိုက်ခဲံ့ရာ ဧပြီလ၈ရက်နေ့မှာ သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၁၃ရက်နေ့မှာတော့ တပ်မ(၆၆)ကဘဲ ပွိုင့်(၁၇၃၈ )တောင်ကုန်း ကိုးကန့်စခန်းတွေကို ဆက်လက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ(၂၃ ၊၂၄ ရက်) တွေမှာ တပ်မ(၃၃) ဟာ လောက်ကိုင် မြောက်ဘက် ဟေး ထောက်ကျင်ဂွင်၊ ရန်လုံးကျိုင်ဒေသအနီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခိုင်အမာ ခြေကုပ်စခန်းကြီးတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ တပ်ရင်း တရင်းလုံး ကျွံဝင်သွားပြီး ပစ်လမ်းကြောင်း ပုံသေဆင်ထားတဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပွိုင့်(.၅)စက်သေနတ်ကြီးများနဲ့ လက်ဖြောင့်စစ်သည်များရဲ့ လက်ယှက်ထိုး ဇစ်ဇက် သတ်ကွင်း အတွင်း ဝင်သွားတာကြောင့် တပ်ရင်း(၃)ရင်း ဖွဲ့စည်းပုံပျက်ကာ ထိခိုက်ကျဆုံးမှူများခဲ့ပါတယ်။ အထက်ပါ တိုက်ပွဲများမှ လက်လှမ်းမီသရွေ့ တပ်ရင်း နှင့် လူအမည် မဖေါ်ပြတော့ဘဲ တပ်မ (၆၆ ၊ ၃၃)တို့မှ တပ်ရင်းမှူးနှစ်ဦး ကျဆုံးကာ အရာရှိ၊စစ်သည် ကျဆုံးဒဏ်ရာရ အနည်းဆုံး (၂၀၀) ကျော်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂။ မေလ၁၃ရက်နေ့မှာတော့ တပ်မ(၃၃)၊ တပ်မ(၈၈)၊ စကခ(၁၆) တပ်မတွေဟာ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့စခန်းကုန်းတွေဖြစ်တဲ့ ပွိုင့်(၁၆၀၇၊ ၁၇၀၉၊ ၁၇၄၂)တွေကို ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပြီးမှ ရခဲ့ပါတယ်။ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့စခန်းတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးကုန်းဖြစ်တဲ့ ပွိုင့်(၂၂၀၂) အား တပ်မ(၉၉)ကို ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီး စစ်ကြောင်း(၃)ကြောင်းဖြင့် ဂဏန်းလက်မပုံစံ စစ်ဆင်ခဲံ့ရာ မေလ(၁၄၊ ၁၅) ရက် တွေမှာ ပင်မကုန်းမကြီး ပွိုင့်( ၂၂၀၂ )နဲ့ နောက် တောင်ကုန်း ပွိုင့် (၂၀၇၁ ) တို့ကိုပါသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နည်းဗျူဟာမြောက် စစ်မြူ ၊ရောင်ပြ စစ်ကြောင်း တကြောင်းကို တိုက်ဟန်ပြု ထိုးတင်လိုက်ချိန် ယခင်ကလိုဘဲ ကျွံဝင်လာပြီ အထင်နဲ့ ကိုးကန့်တပ်မဟာမှူး ရန်ကွမ်းက အင်အား(၂၀၀) ထပ်ဖြည့်ပြီး ဆင်းလုံးဖို့ စုရုံးခိုင်းနေချိန်မှာဘဲ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့တပ်မတော်ဘက်မှ အမြောက်ကြီးများရဲ့ စုပြုံပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့် အငိုက်မိသွားကာ တပ်မဟာမှူးအပါအဝင် အင်အား(၁၀၀) ကျော် ထိခိုက်ကျဆုံး သွားပါတယ်၊ တပ်မတော်ရဲ့ ယောင်ပြ စစ်ကြောင်းဟာ လက်ဖြောင့် စစ်သည် သက်သက်သာ ရွေးပြီး ထိုးတင်လိုက်တာမို့ အမြောက် စပစ်ချိန်မှာ ပေါ့ပါးလျင်မြန်စွာနဲ့ နောက်ကို အသာဆုတ်နိုင်ပါတယ်။ တပ်မ(၉၉) အဓိကစစ်ကြောင်းဟာလည်း မတ်စောက်ပြီး မထင်မှတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှ တက်လို့ ရလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တွေ ရေရှည် ဆက်ပြီး ခံစစ်ဆင် နွှဲနိုင်ဖို့ရာ ဆက်စပ်တောင်ကုန်းကိုပါ ထိန်းလို့ မရနိုင်တော့ဘဲ လက်လွှတ် ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်း ရှေ့တန်းအရာရှိများကဆိုပါတယ်။
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ရွေ့ပြောင်းစစ်ကစားမှု၊ နည်းဗျုဟာ သုံးသပ်ကြရာမှာ ရှင်ခုတ်ထန်ဒေသ၊စီေ က်ာဂျာဒေသ၊ စန်တအိုက်ရှန် ကုန်းမြင့်ဒေသတွေကို တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် ကိုးကန့်တပ်တွေဟာ အင်အားများကို ပြန်လည်စုစည်းကာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အမှတ် (၁၁၁) မှ ဝင်ရောက်ပြီး မာလုရွှေဒေသ အတွင်းရှိ တောင်ကုန်းများကို အခြေပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မေလ (၁၃၊၁၄) ရက်တွေမှာ အထက်နားကဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ပွိုင့်ကုန်းများ(၁၆၀၇၊ ၁၇၀၉၊ ၁၇၄၂)ကို တပ်မတော်က သိမ်းပိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မေလ၂၁ရက်မှာ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ နောက်ဆုံးစခန်းကုန်းလည်းဖြစ်တဲ့ ပွိုင့် (၁၇၇၈)(ကုန်ကြမ်းနယ်၊ မာလုရွှေ ဘီပီ ၁၁၁) အား တပ်မ(၆၆)က အမြောက်ပစ်ကူနဲ့ တက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
၃။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြည့်တဲ့ရက် မေလ၁၇ရက်မှာ တပ်မတော်က စစ်ဆင်ရေးပြီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ လွှတ်တော်မှာ အချိန်ကာလ ထပ်တိုးပေးဖို့ တင်နေဆဲမှာပင် မေလ (၁၄)ရက် ပွိုင့် (၂၂၀၂) အား အသည်းအသန် ကပ်ပြီးမှ သိမ်းလိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို မသိမ်းလိုက်နိုင်ပါက လွှတ်တော်မှာ မေးခွန်းထုတ်ခံရတာ ပိုမို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ စခန်းကုန်းတွေ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း တပ်မတော်သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါ ရန်သူဆီမှ သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ လူ၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်းအရေအတွက်ကိုသာ ဖေါ်ပြပြီး မိမိတပ်ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးသူများကိုတော့ တပ်တွင်းစိတ်ဓါတ်ရေးရာနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ကျဆင်းလာမှာကို စိုးရိမ်လာတဲ့အတွက် မဖေါ်ပြတော့ဘဲ အပေါ်ယံ လျှပ် ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်က ခံစစ်ထက် စစ်နည်းဗျူဟာသဘောအရ အခြေအနေ ဖန်တီးခွင့်ရှိတာမို့ အားသာပါတယ်၊၊ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ထိနေတာမို့ စစ်မျက်နှာကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့အပြင် ရင်ဆိုင်ရမဲ့ စစ်မျက်နှာတွေဟာလည်း ချဉ်းကပ်လမ်း ကျဉ်းမြောင်းကာ ကျောက်ဆောင်လို သဘာဝခံစစ်လုပ်ပြီးသား ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြည်မကတပ်မများကို ဆွဲထုတ်ရပါတယ်။ စစ်နည်းဗျူဟာသဘောအရ တိုက်စစ်ဆင်သူဟာ ခံစစ်ဆင်သူထက် အင်အားအနဲဆုံး (၃)ဆ သုံးရမည် ဆိုထားရာ ကိုးကန့်အင်အား(၂၀၀၀) ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် တပ်မတော်က အင်အား (၆၀၀၀) သုံးရမှာဖြစ်တယ်၊ ယနေ့ခေတ် တပ်မတွေဟာ အလွန်ဆုံးရှိမှ အင်အား(၁၀၀၀)ခန့် ဝန်းကျင်သာ ရှိတာမို့ ပျှမ်းမျှ(၁၀၀၀)နဲ့ပဲ တွက်ဦးတော့ တပ်မ အနဲဆုံး(၆)ခု လောက်ထုတ်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မ (၉၉၊ ၈၈၊ ၇၇၊ ၆၆၊ ၃၃၊ ၁၆) လောက်ကိုင် ဒကစတပ်တွေကို အလုံးအရင်းဆွဲထုတ်ရကာ အမြောက်၊ လက်နက်ကြီး အမျိူးအစားပေါင်းစုံ၊ သံချပ်ကာ နဲ့ တင့်ကား၊ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ဂျက်လေယာဉ်စတဲ့ ပစ်ကူ အမြောက်အမြား ထုတ်သုံးခဲ့ရပြီး (ခမရ ၆၊ ခလရ ၄ တပ်ရင်းမှူး ကျ) အရာရှိကြီးအဆင့် အပါအဝင် အရာရှိစစ်သည် ကျဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ များစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရလို့၊ ၂၀၀၀ခုနှစ် နောက်ပိုင်း တပ်သမိုင်း စံချိန်သစ် တင်ခဲ့ပါတယ်။
၄။ စာရေးသူအနေနဲ့ ကိုးကန့်အဖွဲ့စခန်းကုန်းများကို ကျားကုပ်ကျားခဲ ကြိုးစားသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသော်လည်း မပျော်ပိုက်ဘဲ ကျဆုံးသူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်မိပါတယ်။ အလါးတူ ကိုယ့်အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အပြင် မြေဇာပင်ဒုက္ခသည် ပြည်သူ (၈ သောင်း (၈၀၀၀၀)) ခန့် အထိ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတာကို စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို မရည်ရွယ်သော်လည်း ကျူးကျော်သူ ပြည်ပနိုင်ငံတနိုင်ငံသာ ဖြစ်ပါက ဒီအောင်မြင်မှူကို လက်ခမောင်းထခပ် ပျော်ရွှင်မိမှာ အမှန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအရ အချက်အချာမြေ၊ အရေးကြီးမြေကဲ့သို့ ရန်သူ့စခန်းကုန်းများကို သိမ်းပိုက်နိုင်လို့ ရန်သူဟာ စခန်းသက်သေထူကာ အခြေခံနယ်မြေ၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေ တည်ဆောက် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် လက်လွတ် ဆုံးရှူံးသွားတဲံ့ အတွက် နယ်မြေဒေသတည်ငြိမ်ရေး ဟန်ချက်ပြန်လုပ်နိုင်ရန် အပေါ်စီးရသွားတဲ့အကျိူးရလဒ် ထွက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာအရ အချုပ်အချာအာဏာ တည်တန့်ခိုင်မာလာအောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရုံး ပြန်လည်စုဖွဲ့နိုင်ပြီး ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လာနိုင်လို့ ပြည်သူလူထုက အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံမှူရလာတဲ့ အကျိူးရလဒ် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွါးရေးမဟာဗျူဟာအရ ကိန်းဂဏန်းသဘော ယေဘူယျ တွက်ကြည့်ရင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှူများ၊ ဆုံးရှူံးမှူပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက် ရလာတဲ့ အကျိုးရလဒ်နဲ့ချိန်ဆကြည့်ပါက မရှူံး မမြတ်ဘဲ သရေရလဒ်နဲ့ ကျေနပ်ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
၆။ စာရေးသူအနေနဲ့ ကိုးကန့်နယ်မြေအတွင်း တပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်လာမှာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းမိတဲ့အတွက် “ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင်တပ်မတော်သားများကိုဘာကြောင့် အဓမ္မတိုက်ခိုင်းနေရသလဲ?”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွဲရှည် အပိုင်း (၇) ပိုင်းကို မိုးမခမီဒီယာမှာ ဆက်တိုက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်နေသူ တပ်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိူင်တယောက် စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြောင်း စစ်ရုံးအရာရှိတဦးထံမှ သိရပါတယ်။ တချို့က စာရေးသူ၊ ဂါမဏိ … စတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေရဲ့ အချွန်နဲ့ မ တိုင်း လိုက်လုပ်တော့ ချောက်ကျကုန်တာပေါ့ ဆိုပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်ဆောင်းပါးရေးတင်ကြသလို၊ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ commmen တက်လာတဲ့အတွက် စာရေးသူအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြိုဆိုပါတယ်။ စာရေးသူရေးရတာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးထိပ်ထားပြီး တပ်မတော်မှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အမှန်ကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ အချိန်မှီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးမှသည် Standard Army ဖြစ်လာရေး၊ထိုမှ Professional သို့ ကူးပြောင်းစေရေးပါတဲ့အပြင် တပ်မတော်သားများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို လတ်တလာမဖြေရှင်းနိုင်ရင် ထိခိုက် ကျဆုံးမှူ ပိုများလာမှာ စိုးရိမ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားရေးခဲ့ရာ အကျိုးရလဒ်ထွက်ခဲ့လို့ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။
ရ။ အဆိုပါအကျိုးဆက်ကြောင့် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရှေ့တန်းမှာ တိုက်နေရတဲ့ စစ်သည်တွေအတွက် ကက(ကြည်း)က ပစ်ကူ စစ်ကူ စီမံချက်တွေ ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖေါ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ယူကရိန်းက ဝယ်ထားတဲ့ BTR 3U သံချပ်ကာများကို ထုတ်သုံးလာပါတယ်။ တပ်မတော်က တရုတ်ကို အရင်လိုဦးကျိုး မနေတော့ဘဲ မာမာထန်ထန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်လာသလို သံအမတ်ကြီး၊ စစ်သံမှူးတွေကို ဆင့်ခေါ် ရှင်းလင်းလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ တပ်ချုပ်မှ တိုင်းမှူးအထိ စစ်ဆေးရုံရှိ ဒဏ်ရာရ လူနာများကို သွားရောက်အားပေးရာမှာ ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ပြည်သူလူထုအမြင်ကောင်းအောင် အလှအပ၊ ဟန်ပြ မလုပ်တော့ဘဲ “တပည့်၊ မင်းဆေးရုံဆင်းလာရင် မိဘဆီပြန်ဖို့ ခွင့်ပေးဖို့ ပြောထားပြီးပြီ၊ တခြားဘာလိုသေးလဲ၊ မင်းလိုအပ်တာ သုံးဖို့ မုန့်ဖိုးဆိုပြီး ”စာအိတ် လက်ထဲတည့်ပေးတာမျိုး လုပ်လာတယ်။ ဒါတောင် လူကြီးတွေပြန်သွားရင် ခင်းထားတဲ့စောင်၊ ဂွမ်းကပ်၊ အိပ်ရာခင်းပြန်သိမ်းကုန်နေတာ လူမှူမီဒီယာမှာတက်လာပြီး နှိပ်ကုန်ပြန်လို့ မသိမ်းရဲဘဲ ဆက်ထားပေးလိုက်ရတယ်။ ဒါ့အပြင် တပ်မှာဒဏ်ရာရလို့ ဒုက္ခိတများ အပါအဝင် ငတ်ပြတ်နေတဲ့ တပ်မတော်သားအငြိမ်းစားများ နေထိုင်ရာရပ်ကွက်တွေထဲ ရကတ၊ လပခ တိုင်းမှူးတွေက အထက်အမိန့်အရ တအိမ်ချင်း ဆန်အိတ် အပါအဝင် ထောက်ပံ့ရေး ဝေငှပေးတာ တွေ့ရတော့ စာရေးသူ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ပိုပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတာက ကရင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေးမှာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်လှက လူနာကြိုပို့နေတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်များကို ဒန်ပေါက်ထုပ်၊ ထမင်းထုပ်သယ်လာခိုင်းပြီး ရှေ့တန်းမှာ ထမင်းတောင်မချက်နိုင်အောင် တိုက်နေရတဲ့ စစ်သည်တွေထံ အရောက်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ ထည့်ရေးမိတာကြောင့် တပ်ချုပ်ကလည်း အားကျမခံ ထောပတ်ထမင်းထုပ်များကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ရှေ့တန်းစစ်သည်တွေထံသို့ စီစဉ်ပေးတာ သိရတော့ တပ်ချုပ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တပ်မမှူးအရာရှိကြီးတစ်ဦးကဆိုရင် ကျေးဇူးတင်တဲံ့အနေနဲ့ မိုးမခထုတ်မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ဝယ်ဖတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သူ့မိတ်ဆွေများကိုလည်း တတ်အားသရွေ့ ဖြန့်ချီပေးမယ်လို့ သိရတော့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲနေတဲ့ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေဟာ ဂေါက်ရိုက်၊ လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာ မိန့်မိန့်ကြီး မြေပုံကြည့်တာ မလုပ်ရဲတော့ဘဲ ဒုတပ်ချုပ်နှင့်ကာချုပ်(ကြည်း) ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းကိုယ်တိုင် လောက်ကိုင်မြို့ ပြေးဆင်းပြီး ကွပ်ကဲခဲ့တာ သိရပါတယ်။ စာရေးသူတင်ပြခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးတခုမှာ မဲသဝေါ၊ ကမာမောင်းလို့ ရှေ့တန်းနီးတဲ့နေရာမျိုးမှာ စုပုံရိက္ခာ၊ လက်နက်ခဲယမ်း၊ စစ်ဝတ်ပစ္စည်းများ ပုံအောခဲ့တာမို့ စစ်ပွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ စစ်နည်းဗျူဟာ သဘောအရ ပံ့ပိုးရေးအုပ်ချုပ်မှူ ကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့သူဟာ စစ်ပွဲကိုနိုင်မယ်လို့ ဖေါ်ပြထားရာ လောက်ကိုင်ဒေသမှာ စုပုံရှေ့တန်းအုပ်ချုပ်မှူ စခန်းကြီး လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၈။ လာမဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲအပေါ် အတိုက်အခံ၊ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်၊ မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အမြင်တွေမျိုးစုံ ဘယ်လိုရှိနေကြတယ်၊ ဘက်ပေါင်းစုံ၊ ရှူထောင့်ပေါင်းစုံမှ ဖေါ်ပြသွားမှာဖြစ်သလို တပ်ချုပ်နဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ Strategic Power Games ၊ တပ်မတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ငြ်ိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ဦးတည်သွားရေး စတာတွေကို သုံးသပ်တင်ပြသွားပါမယ်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဗိုလ်ထက်မင်း, ဗိုလ်ထက်မင်း, သတင်းဆောင်းပါး, ဝေဖန်ရေးရာ
2 Responses to ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)
hla myint. on May 30, 2015 at 10:33 pm
a reasonably in depth analysis of “Kokant front situations”;
readers get ” insight ” what is
thanks bo htet min.
Thantzin on May 31, 2015 at 6:49 pm
Goon on Ya ! Bo Htet Min .